Tahirin-kevitra 📚 - Page 5 of 6 - Tily eto Madagasikara
Ny votoatiny avy hatrany
Tily eto Madagasikara
Inona ny Tily ? ℹ
Vakoka sy tantara
Aiza no misy Tily ?
Akatona ny fikarohana
Akatona ny menu
Aseho ny sous-menu
Ny Hairaha Menafify no foto-java-makadiry iorenan‟ny Sampana Menafify. Toy izao no firafitry ny HAIRAHA MENAFIFY izay aseho amin‟ny dingana telo mazava tsara : Fanatanterahana ketrika Menafify Ketrika no anarana iantsoana fivorian’ny Mpitarika ao amin’ny Sampana Menafify (Fokonolona – Fileovana). Ao amin’ity dingana ity no sehatra ifanakalozan-kevitra, ipoiran’ny hevitra iraisana ka ifanekena ho iaraha-manatanteraka. Ny Loholona […]
Ny toe-tsaina menafify
Tovolahy, Tily, 21 taona hatramin’ny 25 mifanabe ka antsoina hoe: « Mpitarika » no antsoina hoe Menafify. Misy lafiny roa mampiavaka ny « Mpitarika » : Manana « FANIRIANA » izy. Io Faniriana io no apetrany ho tanjona dia ny haha-mpitarika azy rahatrizay, Manana « TOETSAINA » mpitarika. Tokony hananan’ny Menafify rehetra ny faharesen-dahatra hoe « MPITARIKA AHO ». Sahy. Mahery fo. Maharitra […]
Ireo tsara ho fantatra momba ny Menafify Faritany (MEFAR)
Fivondronana maromaro manana Tily Menafify no mivondrona ao anaty Menafiy Faritany na MEFAR. Mivory indray isam-bolana farafaharatsiny ny MEFAR na arakaraka ny fandaminana ao anaty faritany mba hsian’ny fihaonana iraisana. Zava-kendren’ny Menafify Faritany (MEFAR) Famelomana ireo fivondronana manana Tily Menafify vitsy (1 na 2 na 3 fotsiny) Fifankazarana sy fifaneraserana eo amin’ny samy Menafify ao […]
Skoto 22 tamin’ny 1907, ho lasa 100 tapitrisa amin’ny 2023
Ara-tantara, dia ilay Lasy notarihan’i Baden Powell (Bipi) tamin’ny taona 1907, tao amin’ny Nosy Brownsea Angletera, no niandohan’ny Skotisma. Tovolahy miisa 22 avy amin’ireo sarangam-piaraha-monina nisy tao an-toerana no niaina izany lasy voalohany izany. Hatrany am-piandohana dia efa tao an-tsain’i Bipi ny hanitatra ny Skotisma manerana izao tontolo izao. Ary ny taona 1920 dia efa […]
Politika Nasionaly Fanabeazana 2018-2021
Iaraha-mahalala ny zava-misy amin’izao fotoana izao, indrindra eo amin’ny lafiny Fanabeazana, fa tena mila manao ezaka isika zoky, Ray aman-dReny, olon-dehibe amin’ny sehatra samihafa eto amin’ny Fiaraha-monina misy antsika, ny amin’ny hanohanana ireo tanora eo amin’ny lafiny Fanabeazana. Iraka napetraky ny Tompo amintsika rahateo izany. Manana iraka manokana ny Departemanta Fanabeazana na ny DFB ny […]
Izy no … Ramino Paul
Pasitera Ramino Paul Abraham, angady nananana sy vy nahitana ary tandroka miaro ny vozona tao anatin’ny skotisma izy, hatramin’ny fahakeliny mihitsy. Betsaka ireo andraikitra efa notanany, manan-talenta izy ary miaina ao anatiny ny teny hoe « Skoto indray andro, skoto mandrakizay ». Ny niandohany Tao amin’ny fivondronana faha-12 Avaratr’Andohalo no nisy azy ary tao ihany […]
Izy no ...
Ny mpiandraikitra Tily sy ny kalitao
Tato anatin’ny taona vitsivitsy izay dia novoizina teto anivon’ny skotisma ny teny hoe « kalitao ». Tsy teto Madagasikara ihany fa nanomboka tany amin’ny fitantanana manerantany (OMMS) no nanaparitaka sy nivoy izany, ho fenitra iaraha-manatratra manoloana ny fanabeazana ny tanora sy ny fitantanana madio sy mangarahara amin’ny endriny rehetra. Ho antsika Tily amin’ny maha-kristiana dia toe-tsaina tahafintsika […]
Olon-dehibe sy kalitao
Paikady laharam-pamehan’ny skotisma
5 avril 2014
Firotsahan’ny tanora Fampivelarana ny hay rehetra handraisana anjara mavitrika eo amin’ny ﬁkambanana sy ny ﬁarahamonina. – Ny skotisma dia manome sehatra ny tanora hampivelaran’izy ireo ny fahaiza-manaony sy ny fahalalany hahatonga azy ireo handray anjara mavitrika eo amin’ny ﬁkambanana sy ny ﬁarahamonina. Fandraisana anjara, fankasitrahana ary ﬁfampizarana eo amin’ny olon-dehibe sy ny tanora no fanalahidin’ny […]
Lalàna folo Tily
9 avril 2000
Tokan-teny ny TilyMahatoky ny TilyVonona hanasoa namana ny TilyHavan’ny olona rehetra ny Tily ary mpirahalahy daholoManaja olona ny TilyAntra biby sy tia mandinika zava-maniry ny TilyMpankatoa ny TilyMihira sy mitsiky ny Tily raha sendra ny sarotraSahy, mahery fo ary maharitra amin’ny asany ny TilyMadio tena, eritreritra, fiteny sy fihetsika ny Tily
Fanabeazana, Sampana Maitso Tily, Sampana Mena (Mpiandalana), Sampana Menafify
Firaisan’ny Skotisma eto Madagasikara (FSM)
26 mai 1997
Sata mifehy ny Firaisan'ny Skotisma eto Madagasikara (1997)
← Lahatsoratra vaovao 1 … 4 5 6 Lahatsoratra taloha →
Lisitry ny Faritany Tily 📌
Tanjon’ny Fandrosoana Lovainjafy 🌍
Branche ainée (Menafify)
Sampana Maitso Tily
Sampana Mavo Tily (Lovitao)
Sampana Mena (Mpiandalana)
Fomba sy tarazo
Izy no …
Inona ny Tily ?
Ny Tily dia fanabeazana tanora skoto protestanta zazalahy, sady mamolavola azy handray anjara hanorina tontolo tsara kokoa. Fantaro ato
Akany kristianina ho an’ny zatovolahy,
BP 771, Antananarivo 101
09h00 – 12h00
14h00 – 16h30